WARAYSI GUDOOMIYAHA TAF YAASIIN FAARAX OO UU KAGA HADLAYO HALKA UU MARAYO CUSBITAALKA MAANDHAYE | Toggaherer's Weblog
WARARKII U DANBEEYEY EE DAGAALKII AY JABHADA OGAADEEN KU SOO QAADAY HABAASWEYN IYO KAMAROOYAAN
WARAYSI DHEER OO AANU LAYEELANAY GUDOOMIYAHA URURKA TAF YAASIIN FAARAX JEES OO UU KAGA HADLAYO HALKA UU MARAYO CUSBITAALKA MAANDHAYE.
Waxaanu dhawaan waraysi la yeelannay Guddoomiyaha Ururka Togdheer Abroad Foundation marka la soo gaabiyana loo yaqaan TAF, oo lagu aasaayay waddanka Ingiriiska badhtamihii sannadkii 2005 iminkana ka dhisan dhammaan magaalooyinka Ingiriiska iyo meelo badan oo ka mida caalamkaba. Ururku waxuu iminka ku hawlanyahy cusbitaal loogu talo galay dadka xanuunnada dhimirka qaba oo uu dhismihiisu ka socdo Magaalada Burco ee Gobolka Togdheer.
Haddaba ugu horraynba waxaan waydiiyay guddoomiyaha maadaama uu ururku disnaa muddo intaa gaadhaysa ilaa iyo hadda waxay qabteen, wuxuuna ku jawaabay sidan:
J: Bismilaahi raxmaani raxiim, marka hore waxaan salaamayaa dhamaanba ummaddda muslinka ahi meel ay joogaan, gaar ahaanna inta jecel horumarka iyo inay waddankoodii wax u qabtaan. Haddaan u imaaddo suaashaad I waydiisay ururku waxuu qabtay waxyaalo aad u fara badan muddadii uu jiray, haddan se kuu soo kobo waxaa kamida deeqo aannu gaadhsiinay Jaamacadda Burco iyo biriij kii labaad ee burco loo dhisaayay oo aannu si teelteela uga qayb qaadannay, isku xidhka dhalinyarada qurba joogga ahoo iminka dallad midaysan ah iyo mashruuca ugu weyn ee ururku tan iyo muddadii la aasaasay uu gacanta ku hayay oo ah Cusbitaalka Maandhaye.
S;Markaa Cusbitalkaa maandhaye maxaa loogu talo galay qaab sidee ah ayuu se u shaqaynayaa?
J: Maandhaye waa cusbitaal loogu talo galay dadka qaba cudurrada ku dhaca maskaxda ama dhimirka, waa cusbitaal u shaqayn doona qaab casriya sida cusbitaallada wadamada hore u maray.
S:Ilaa iyo hadda halkuu dhismihiisu idiin marayaa?
J: Horta cusbitaalku waa labo qaybood, qaybta dadka da’doodu ka yartahay 25 sano iyo qayb loogu talo galay wixii 25 sano ka wayn, markaa qaybta hore way dhisantahay waxayna u shaqaysaa qaab bukaan-socod ah ee annagu TAF ahaan qaybtaan wadnaa waa qaybta waxii 25 sano ka wayn, waana qaybta ugu muhiimsan xanuunkuna ugu badanyahay dadka, oo dadka waalan 90% waa dad ka wayn 25 sano, markaa ilaa iyo hadda qaybtaas ayaan wadnaa dhismaheediina gaba gabuu ku dhawyahay.
S: markaa qaybtan aad dhisaysaan maxay ka koobantahay?
J: qaybtani waxay ka koobantahay 15 qol, xafiisyadoodii, madbakhyadoodii, suuliyadoodii, shower-radoodii, labo hool oo waawayn iyo geedh ku wareegsan. Markaa 15 kaa qol ayaa waxay u kala qaybsanyihiin 10 ragga ah iyo 5 dumarka ah, maadaama uu saamiga dadka bukaanka ah raggu u badanyahay.
S: Mashruucan aad ii sheegtay waa mashruuc aad u weyn hawshiisa iyo qarashkiisana leh, markaa yaa kale oo idinka caawiya?
J:Cid naga caawisay cusbitaalkan xaga kharashka ma jirto, dhalinyarada uruku contribution-ka ay bixiyaan iyo dhaqaalo ururin ama fundrising-nno aan ka samayno magaalooyinka ayuunbay lacagtaasi naga soo gashay, walina ma dhamee dee hawshu way socotaa.
S:Cusbitaalkii waa dhawdhaw yahay iminka laakiin markaad dhistaan maxaad ku talo jirtaan, Matalan waxuu u baahanyahay cusbitaalku daawooyin iyo dhakhaatiir taas oo ah kharash u baahan in si joogto ah loo daboolo markaa maxaa idiin qorsheysan?
J:Walaal waa runtaa oo daar intaa la dhiso laga tagaa wax kordhin meyso, laakiin cusbitaalku waa cusbitaalka kaliya ee noocaasa ee ka dhisan gobollada bari oo dhan, markaa waxaannu ku talo jirnaa inaano daawooyinka lagu socodsiinayo cusbitaalka aanu kala kaashanno Hay’ad Germal ah oo uu hogaaminayo Dr Axmed Cawad oo ah diktoor reer Somaliland ah oo daggan waddanka Germany oo horeba isagu daawooyin ugu qaaday qaybtaa bukaan-socodka.
Waraysigan oo Qaybo badan Noqon doona
Abokor Maxamed Cariish